Ogeysiis Ogeysiis :Mustafediini xaji Aden
Monday November 25, 2019 - 08:36:53 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Dhawaaan waxaan idinla wadaagi doonaa INSHA ALLAH , casharo ku saabsan sidii aaad gaadhigaaga u hagaajisan karto hadii ay kugu timaado cilad,
Waxa jira cilado badan oo ku yimaada gadhiga oo aad adigu xalisan karto adigoo gurigaaga jooga Haween iyo Rag kaaad doonto ahowoo .
iyadoo aanad u baahnayn in wakhti kaa lumo ama aad u tagto garage oo aad lacag iska siiso, adigoo dhibta gaadhigaga xal u heli kara ,
-------Vehicles problems----Car Problems & Repairs fix your car yourself, will help you save money.
Hadaba ciladaha farsamo iyadoo aan dib idiinka sharixi doono, waxa jira cilado aad u baahan tahay qalab ama Mechanical Tools
Oo aanan awood u helin in aad haysato , balse aad sii hagaajisan karto inta aaad garage ka uga tagayso,
Iyadoo aaan idiinku soo gudbindoono casharada si tooos ah , ama muuqaal ahaan,
Wxaan rajaynayaa in dad badan ka faaiidan san doonaan , INSHA ALLAH.
Bal ka soo qaad gaadhigaaga oo subixii kuu is taadhmi waayo ,iyadoo Battery gu kuu buuxo oo dab leeyahay , should be measured at 12.6 volts or above , dabka ku jiraana dhan yahay 12 voltage iyo wax la jira.
Hadaba sidee ku ogaaan kartaa cilada jirta ,mise ogaan kartaa gaadhiga in uu ku jiro dab kuu starting gareeya , in la mid ah 11.5V (50% )mise cilad kalaaa jirta , arimahaaas iyo dhamaan kuwan hoos ku xusun baa ka mid noqondoona Casharada aaad si toos ah idiinku soo gudbin doono,
( Ciladda ku timaada Battery ga iyo waxyabaha sababa in uun dhinto Battery gu .
2: Flat Tires or Damaged Wheels:
Air baxa taayirka iyo dhawaca daawaha.
3: Car Lock Out:
Hadii gaadhigu ka xidhmo furihiina gudaha ku jiro. Sidee ugala soo bixi kartaa adigoo aan jabin wax class ah ama muraayad.
4: Damaged Alternator:
Dhibaatooyinka dynamic ga , daynabada ama ciladeeda iyo waxay u tarto gaadhiga .
5: Failed Motor Starter:
Cilada ku timada start motor ka , waa wax yaabaha sababa in aanu gaadhigu is taadhmin.
The starter won't crank,
nothing happens when you turn the ignition key to the "Start" position,
6: Faulty Electricals:
Ciladaha qaybaha dabkoodhan sida , Fuses ka , lights on dashboard, Short circuit cables, ( xadhko xidhiidhsan oo battery ga kaa ridaya ma Fuses gubayaa I.W.M.
7: Faulty Sparks Plugs:
Cilada balaagyaddu ay keeenan , iyo wax tarkooda .
8: car replacement lights:
Badalida nalalka (laydhka ) horee iyo danbe ba .
9: check oil level,water, oil break, and hydraulic oil and how to Fill:
Eegidda saliidaha , biyaha , kuwa steeringka iyo bereegyadda iyo filterskaba iyo Sida loo buuxiyo.
10: how to know if car battery is discharged:
Sidee ku ogaan kartaa hadii gadhigu dabka Battery ka cunaayo iyadoo Battery gu cusub yahay , daynabaduna (dynamic or Alternator)kuna charged garnaynaayo .
11:brake pads, wiper blades, and all the parts Mechanical and Electrician replacement:
Sidee u Badalikartaa bireegyada , muraayad qalajisada, filtarada, Fuseska , Batteryga , balaagyadda , iyo dhamaan gaadhiga wixii ku saabsanba qaybta dabka , Wareeegyada iyo body ga oo dhanba .
Waxaad kaloo ogaan kartaa wax kastoo ku saabsan gaadhiga iyo sida uu u shaqeeeyo gaadhigu.
Iyadoo aanay wax weyn ba hayn sidan wada og soonahay gaadhigu ama baabuurku wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo kali ah , marka laga Reebo qolofka ka sare ,
1- ignition system:
2- rotating parts function,
3-compressor, water and oil function
Iyo qaybta hawada , biyaha iyo saliidaha .
Mudane iyo Marwo markastaa su aashada jawaabteeda waa kuu diyaar .
Cilad kastoo gaadhiga kaa haystan waxaad ka helaysaa caawimo buuxda.
Mustafediini Haji Aden ( Muhindis)